အရင်ဂ ရီးစားစာ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Poetry » အရင်ဂ ရီးစားစာ
Posted by မဟာရာဇာ အံစာတံုး on Dec 18, 2012 in Poetry | 49 comments
အရင်က ရီးစားစာ ကဗျာ …
အတွေးတွေထဲမှာ စိုးမိုးထားတယ် …
ရင်ထဲမှာ အမြစ်တွယ်နေတဲ့ အချစ်တွေက
စိတ်ကူးနဲ့ ရူးနေစေတတ်တယ် …
နည်းနည်းလေး နားထောင်ကြည့်ပေးပါလား ..
‘သိပ် ချစ်နေမိတယ်’ လို့
တိုးတိုးလေး ပြောနေပါလိမ့်မယ် …
မလွတ်တမ်း ဖက်တွယ်ထားခဲ့တယ် …
‘သူ မချစ်ရင် အသက်မရှင်နိုင်ဘူး’ …. ဆိုပဲ ။
ဒါလေးဂဒေါ့ .. အရင်တုန်းက တောင်မလေးတီယောက်အတွက်
ခံစား ရေးဖွဲ့ခဲ့ဒါပေါ့ဗျာ ….
ဖွဲ့ခဲ့တယ် ဆိုနိုင်ရုံပါပဲ … တစ်ယောက်တည်း ခံစား ဆိုသလိုပေါ့ ….
(ကျုပ်ဘွဂ ကံဆိုးလှဘာဒယ်ဂျာ .. ကြိုက်သူ မချိ၊ ခိုက်သူ မချိ၊ ပြောဒေါ့လည်း မရနဲ့ … အင်းးး အဲ့လိုဘဲ … )
အားမငယ်ပါနဲ. ကိုကိုအံ ကိုကိုချစ်ချစ် ဘီအီး အနှစ်ကလေးချိပါတယ်.. တစ်ဘဝစာ သူက ချစ်သွားမှာပါ……
စိတ်ညစ်လို့ အရက်ကို သောက်တယ်
အကြောင်းရှာတော့ ဂေါင်းဘာ ချာချာလည် .. အေ့ .. ဂေ့ ..
ဦးဆုံး လာအားပေးတဲ့ တိုတိုတိုက်ကို ကျေးကျေး အကြီးကြီးပါ ..
ကိုအံစာဂျီးရဲ့ မိန်းမ အိမ်သူခင်ထား မရွှေချော ဒေါ်ညွှန့်စိန် ကြီးတော့
ကံကောင်းတာပဲဗျာ အိမ်မှုကိစ္စ အကုန်တာဝန်ကျေရုံမက ကဗျာစပ်
စာစပ်လေးက ကောင်းလိုက်သေးတယ် ဒီလို ကိုအံစာဂျီးကို ရထားတဲ့ ဒေါ်ညွှန့်စိန် ရေ
ဟိတ် …. အံချာဒုံး သများကို ရည်းစားစာ ပေးတာလား
စဉ်းစားပရစေအုံးနော် လူဂျားဒဲ အဲ့လိုဂျီးပေးတော့ ရှက်ထာပေါ့လို့ :opps:
ဘွဂ ကျမ်းဘာဒယ် ….
မစွံဒါလည်း ပျောနေနဲ့ဒေါ့ ..
ချိန်လိုက်တိုင်း လွဲလွဲနေတတ်တယ် ..
ဂယ်ဘာဘဲ .. ချိတ်ကုန်ဒယ် ..
မနိုဗွီ ကျေးကျေးပါနော့ ..
အံချာတုံးမ နင်က ဦးနှောက်လေးကသာ မကောင်းရှာတာ ကဗျာလေးကတော့ ကောင်းရှာတယ်ဟဲ့
ဒီဘွကြီးကို စိတ်ကုန်နေလဲ စစ်ကိုင်းချောင်သွားပြီ သီလရှင် ဝတ်ရအောင်ဟယ် နာဒို့ မန်းဒလေးကို လာခဲ့ပါလား :harr: :harr: :harr:
နင်ဂ တီလှရှင် ဝတ်သွားရင် နာဂ ဘာလုပ်ရမှာလဲဟင်းးးးးးးးးး
တီလှရှင်တော့ ဝတ်ပါနဲ့ကွယ် ဗြဲးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးး
နင်မကြိုတ်တာတွေ မလုပ်တော့ပါဝူးးးးးးးးးး ဗြဲးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးး
နာကြိုတ်တာတွေ ပဲနာလုပ်တော့မှာပါးးးးးးးးး ဗြဲးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးး
နာက တီလရှင် ဝတ်တော့ နင်ကနောက်ကနေ ဆန်အိတ်ထမ်းလိုက်ပေါ့ မိုင်းဘိုရဲ့
ပြီးရင် ဘောလုံးပွဲ လောင်းမယ်လေ :harr:
အနော်ဂ လူဂျိုချောချောလေး ချိသေးတာဂျ ..
ဂျီးဒေါ်ဘဲ စစ်ကိုင်းချောင်တွား ..
ကျုပ်ဂဒေါ့ တွားဘူး ..
နဖူးစာဆိုတာ ကြောလို့ ရဒါမှ မီဟုတ်ဒါ .. ငွင်းး ငွင်းး
ကိုင်း … ပီးရော ..
ဦးမာဃနဲ့ များ ကွာပါ့
မတူရင် မတုနဲ့ ကွဲ့
ဘွဂ ကျမ်းဘာဒယ် ..
မစွံဒါလည်း အမှန်ဘာဘဲ ..
ခညားနဲ့လည်း ယှဉ်ချင်ဒေါ့ဘာဘူး …
ခညားဆီဂလည်း မတောင့်တပါဘူး …
ဘယ်ဂလာ မစွံရမှာလဲ Miss.Mar Ga အယှဉ် သကြားမင်ရ
ဇယားဆရာဂျီးကိုအံစာ ကမစွံဘူး မစွံဘူးသာပြောတာ တဂယ်ဃ တူ့မှာစွံလွန်းလို့
ခက်နေတာဗျ။ ဒေါ်ညွှန့်စိန် ဆိုတာ တရာဝင်မယားဂျီးဗျ ။ ပြီးတော့
အလန်းဇယားလေးဒွေ အများဂျီးကိုလဲ တူဂ အုထားတာဗျ။ ဒေါ်လှ နဲ့မှရမှာ
Miss အူးမာဂ နတ်ပြည်မှာ မပျော်လို့ များဂတော့ လာခဲ့စမ်းပါ့ လူ့ပြည်ကို
ကိုအံစာ ဆီက အလန်းဇယား လေးတွေနဲ့ ကျုပ်က ဒေါ်လှ အကုန်ခံပြီးတော့
ပြုစုဧည့်ခံပါမယ်။ ဇယားလေးတွေကို တူဂဆွဲးရင်းဆွဲးရင်နဲ့ ကြာလာဒေါ့
မျက်နှာများတယ်ဆိုပြီး ဇယားလေးဒွေဂ တူ့ကို ၆ မျက်နှာလို့ခေါ်တာဂျ။
ဒါ့ကြောင့် ကိုအံချာ ကြီးဆိုပြီး နာမည်ကြီးသပေါ့ဂျာ။ ဇယားမှာ ဘီလောက်ကျွမ်း
ကျင်တယ်ဆိုတာကတော့ Posts collection တောင်မှ တစ်ရွာလုံးမှာ ကိုအံချာ
ဒေါ်ညွန့်စိန် ဆိုဒါ ခညားဂျီးဒေါ်လားးးး
ဒါ့ထက် ဇယား ဆွဲတယ်ဆိုတာ ..
ဇယားကွက်ကိုပဲ ကြောဒါ မီဟုတ်လား …
ရှင်းရှင်းပြော .. ငွင်းး ငွင်းးး
လာရောက် အားပေးတာ ကျေးကျေးဘာ ..
လူပျို အပျို ချစ်ကြ ကြိုက်ကြ ညားကြတာပဲ………ကျနော့ ရီးစားးးးးးး
ကျုပ်ကို ခညားလိုများ မှတ်နေဒလားးး
တစ်သက်မှာ တစ်ယောက်တည်းပဲဗျ …
မရရင် ယူဘူးးး ရရင်လည်း တစ်ယောက်တည်းဘဲ ..
ဒါဘဲ .. ဟိုဟာ ကြက် ..
မပေါင်းလည်းခက် ပေါင်းလည်းခက် တဲ့ ညီလေးရေ…။
အဲဒီတော့ မရှိဘူးဆိုတော့ ငါးဆယ်ရာခိုင်နှုန်း ကောင်းပြီး…
ဦးဘလက်ဂျီး ကြောဒလိုဆို ..
ငါးဆယ်/ငါးဆယ် ဖြစ်နေဒါပေါ့နော် ..
ဦးလေးဂျီးလည်း ငါးဆယ် မကောင်းဘူးလို့ ..
ပေါလို့ ရဒလားဟင်င် ..
နောက်ဒါဘာ ခညာ …
ခုလို ဝင်ရောက် အားပေးသွားလို့ ကျေးကျေးဘာ ခင်ဗျာ …
မာမီနဲ့ဆိုင်လို့ မာမီဖတ်တော့ဝူးနော် …… အဲ့လာလေးသိအောင် ဝင်ပြောလိုက်တာ ……
မဖတ်မှန်း သိရအောင်ဂို ဝင်ပေါတွားဒေးဒါဂိုးးး
အိုက်ဒါဂျောင့် မာမီကို ယောက္ခမ တော်ချင် .. အဲလေ ..
ဒီလိုနဲ့ မဟာဘာဂျာတျောက် ငှက်ပျောတုံး ဖက်ပြီး ကျန်ခဲ့လေတော့သတဲ့
အော် .. အော် ..
ကျုပ်ကို ပေါဒါလားဂျ ..
ငှက်ပျောတုံး ဖက်ရမယ်ဆိုဒါ …
ပြန်ပြောလိုက်ရ .. မကောင်းဘဲ နေဒေ့ါမယ် .. ငွင်းး ငွင်းး
မမဂျီးမို့ ရှော်ပေးလိုက်ဒယ် မှတ်ဘာ ..
ကြုံတုန်းလေး ဝင်ကြိတ်လိုက်အုံးမှ။ ကျနော်ကျတော့ ရည်းစားစာ မဟုတ်ဖူးဗျ။ အရင်တုန်းက မိန်းမချင်း ငေးကြည့်ရလောက်အောင် လှလွန်းတဲ့ လှလွန်းဆွေ မိန်းကလေးတယောက်က ချစ်ရှာလွန်းလို့ သီချင်းတောင် စောင်းဆိုပြီး အခွင့်အရေးပေးခဲ့တာ။ မယူလိုက်မိဘူးဗျာ။ အခု စဉ်းစားရင် နှမြောလို့ကို မဆုံးဘူး။(ပြောရတာ အရသာ ရှိလိုက်တာ)
အဲဒါဗျာ။ ကျနော့် အဖြစ်ပြောပါတယ်။ ကျုပ် သူငယ်ချင်းတယောက်ဆို တဖျစ်ဖျစ်တောက်တောက်နဲ့ ပြောလို့ မဆုံးဘူး ဟီး ဟီး။
ကြုံလို့ ပါစင်နယ် ထည့်လိုက်ပါတယ်။ မကြည်ရင် မမြင်ချင်ယောင် ဆောင်သွားကြပါ။ ကြွားတယ်တို့ အသားယူတယ်တို့ ဘာမှထပ်မပိုကြပါနဲ့ ဟဲ ဟဲ။
ဟာ .. ကိုစံလှကြီးပါလား ..
ခုလို ထူးထူးခြားခြား လာရောက် အားပေးတာ ကျေးဇူးပါဗျို့ …
ဒီနေ့ ပြန်ရင် အောက်ကို သေချာ ကြည့်သွားရမယ် ..
ပိုက်ဆံလေးများ ကောက်ရလေမလားလို့ …
ဒါနဲ့ ကိုစံလှကြီး ပြောတဲ့ အကြောင်းက
ဟာ ကိုမဟာရာဇာအံစာတုံးနဲ့ ကို Mobile ကလဲ အဟုတ်ကြီးပေါ့ဗျ။ သူဖတ်မိရင်တောင် စိတ်မကောင်း ဖြစ်နိုင်တယ် ဟီး ဟီး။ လှလိုက်တာကလဲ အသားအရေက ဖြူတဲ့အရောင်မှာ ဝင်းတာလေးပါ စွက်ထားလိုက်သေး။ ဆံပင်လေးကလဲ နက်မှောင်ပြီး မျက်ခုံး မျက်လုံးဆိုတာတော့ ပြောမနေနဲ့ဗျို့။ အမှန်တော့ အဲဒီတုန်းက ကျုပ်ကလည်း ကြိုက်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် လူကြီးတွေနဲ့ သူနဲ့က သိလို့ သွားတိုင်ရင် ကိုယ်ကျိုးနည်းဆိုပြီး ကြောက်တာရယ် အတွေ့အကြုံက မရှိသေးတော့ စိတ်ပူတာရယ်နဲ့ အချိန်ဆွဲလိုက်တာ သူက အရွဲ့တိုက်ပြီး အခြားတယောက်နဲ့ တွဲပြပါလေရောဗျို့။ နောက်တော့ နှစ်ယောက် မဆုံနိုင်တော့ပြီဆိုမှ သူက ငိုရှာတယ်တဲ့။ အတွင်းသိက သတင်းပေးတာ။ ကျုပ်စိတ်ချမ်းသာအောင် ညာတာလည်း ဖြစ်နိုင်တယ်ဗျ။ အခုတောင် ခင်ဗျားတို့ကို ပြန်ပြောရင်းနဲ့ အဟောင်းတွေက အသစ်ဖြစ်လာပြန်ပြီ။(အရသာ အရသာ ပြောရတာ အရသာ ရှိလိုက်တာ)
အရင်တုန်းက အချိန်မဟုတ်ပဲ အခုဆိုရင်တော့ ဘယ်ရလိမ့်မလဲဗျာ။ လွန်ခဲ့ပါပြီဗျာ ဒါတွေ မပြောတော့ပါဘူး။ အခုတော့ သူ့မှာကလည်း ကလေးတွေနဲ့ ကိုယ့်မှာကလည်း အကြွေးတွေနဲ့ပါ။
ဟိုကတော့ ကလေးတွေနဲ့ …
ကိုစံလှကြီးမှာတော့ အကြွေးတွေနဲ့ပေါ့ ….
အတော် ပျော်တတ်တာပဲဗျ ….. နော့ ….
ကျုပ်တော့ ဒီအကြောင်းကို တကယ် ယုံလိုက်ပြီဗျို့ ………။
ကိုစံလှကြီး ရေ ဟိုသီချင်းလေးကိုသာ ညည်းနေလိုက်တော့ဗျာ
“မောင့်အပြစ်နဲ့ မောင်သာ ရှိပါစေတော ့မေရေ ” ကြားဖူးတာလေး
မဟုတ်ဘူးဗျ။ သူ့အပြစ်လဲပါတယ်။ သူ့ရဲ့ အရွဲ့တိုက်ပြချင်စိတ်ကြောင့် ဖြစ်ခဲ့ရတာ ဟဲ ဟဲ။(ဒီစာကို မဖတ်မိပါစေနဲ့ဗျာ)
ဟဲ ဟဲ ကိုစံလှကြီးကလဲဗျာ အမှန်ကို ဝန်ခံပါ့ဗျ။
ရှက်ရမယ့် အလုပ်တွေမှ မဟုတ်တာဗျာ။
ဘာဖြစ်လဲ ဘာဖြစ်လဲ ပြောပစ်လိုက် ပြောပစ်လိုက် ကိုညံရင်
ညံ့တယ်ပေါ့။ ဟဲ ဟဲ ဟဲ ကိုစံလှကြီး ရှက်ကိုရှက်ကန်းနဲ့ ပြောနေတာလေး
ဖတ်ရတာ ရယ်ချင်လှသဗျာ။ ကျုပ်တို့ နဲ့ညားကတော့ ကွာဘဂျာ …….
ခု ရီးစားစာ ရှိသေးတယ်လို့ ဆိုလိုတာပေ့ါ။ :harr:
ခု ရီးစားစာ ချိဘာဘူးဂျ .. အဟီးးး
ကိုအံစာတုံးရဲ့ အရင်က ရည်းစာကို ဆက်သိမ်းထားဗျာ။
နောင်အချိန် ပညာရှိကဝိ အကျော်တစ်ဦးရဲ့ အန်းတိတ် ရည်းစားစာဆိုပြီး
လေလံတင်ရောင်းမယ်ဗျာ။ ရောင်းရငွေကိုတော့ အချိုးကျလေးပေါ့နော်။
$ 100 ပေးမယ်ဗျို့
ဦးခင်ခကြီးကတော့ နောက်ပြီ …
တဂယ်ဂျီး သိမ်းထားလိုက်တော့မယ် …
ကျုပ် အဖိုးဂျီး ဖြစ်ဒဲ့ အခါကျရင်
ဦးခင်ခ ပြောသလို လေလံတင် ရောင်းပလိုက်မယ် ..
အိုက်ဒါ ကောင်းဘူးလား …
အကောင်းလည်း အကြံပေးရသေးတယ် နောက်တယ်လေးဘာလေးနဲ့
စိတ်မဆိုးတတ်တော့ လဘက်ရည်ဝယ်တိုက်ခိုင်း ပလိုက်မှာ ဒါဘဲ။
ကျုပ်တော့ ညည်းကဗျာဖတ်ပြီး မျက်လုံးထဲမယ့် ကျုပ်ကော်ဖီခွက်ကိုပဲ မြင်လာပါလား..
ကော်ဖီကိုသာ ကျုပ် ကဗျာထဲကလို စွဲလမ်းလို့ကတော့
မြန်မြန် သေမှာဘဲ … ငွင်းးး ငွင်းးး
လာအားပေးတာ ကျေးကျေး …
သူငယ်အံတို့များ မတော်လိုက်ရတဲ့ ရည်းစားတွေကို အမြတ်ထုတ်ပြီး ကဗျာတွေ ရေးပြလိုက် အသဲတွေ ကွဲပြလိုက်နဲ့ ။
အရင်ရော အခုရော နောက်ရော သူ့ဟာက ပြီးမဲ့ပုံမပေါ်ဘူး။ ဘယ်နှစ်ယောက်များ ချိန်ပါဖြစ်ခဲ့တယ် မသိဘူး။
ဘယ်နှစ်ယောက် ချိန်ပါ ဖြစ်ခဲ့လဲ မမေးပါနဲ့ ..
မေးတိုင်းလည်း မှန်မှန် ဖြေလိမ့်မယ်တော့ မထင်ပါနဲ့ ….
ဟော .. မွန်မွန် ကိုပဲ ကြည့် …
သူက ကိုကိုအံရယ် .. အရင် ဘယ်လောက်ရှိခဲ့လဲ ဆိုပြီး
ချွဲချွဲနဲ့ အတင်းအကြပ် မေးလို့ ကျုပ်က ကိုယ့်အသက်ထက် ကျော်ဒယ်ဆိုပြီး ဖြေပေးခဲ့တာ ..
အိုက်ဒါလည်း ဂယ် မမှတ်ပါနဲ့ ….
ပြီးတော့ ဂျီးဒေါ်ပုချ်ကို ကြောလိုက်ဘာအုံးမယ် …
သူညား လုပ်စားနေတဲ့ ခွင်ကို မနာလို မချိဘာနဲ့ …
နာ့ဂို ကြောချင်ဒဲ့လူဒွေ မှတ်ကရော … ငွင်းး ငွင်းးး
ခြောက်မျက်နှာဆိုတော့ တစ်ခါ ချိန် ၆ ယောက်နဲ့ တစ်ခါ သူများနောက်ပါသွားတာလည်း ၆ ယောက်ပဲ နေမှာ။
ဒါနဲ့ ဒီစာ/ကဗျာ ကရော “သူမ” က မဖတ်ဖြစ်လိုက်ဘူးထင့်။ :harr:
ဒါနဲ့ပဲ .. “သူမ မဖတ်ခဲ့သော ကဗျာများ” ဟာ
ဒီကမ္ဘာပေါ်မှာ ရှင်သန်လာခဲ့ရတယ် …….။
တကယ် ရင်နဲ့ ချစ်တတ်ခဲ့တဲ့ …..
“သူမ” က လည်း မဖတ်ဖြစ်ခဲ့လို့နေမှာ ပါ။
ဖတ်ဖြစ်ရင် ညည်း စကားလုံးတွေက ကြွေစင် တွေပါအေ။
တကယ် ရင် ထဲက ထွက်လာမှန်းသိသာပါတယ် ဟဲ့။
ဒီဘဲဥမ ကတော့လေ …
မသိချင်ယောင် ဆောင်နေဒါလည်း မရဘူး ..
နာဂ စိတ်ကူးထဲတောင် ချိဘူးအေ့ …
ကိုင်း .. ဂလောက်ဆို သိဒေါ့ …
ဒါဗျဲ …. ငွင်းး ငွင်းး
ညည်း နည်းနည်းဒေါ့ ရင်ခုန်သံမြန်တွားဒယ်မို့လား
အချင်းချင်းဒွေဘဲအေ နည်းနည်းဒေါ့ စဉ်းဇားပေးဇမ်းဘာအေ့